​यस्तो छ दिवंगत सुशील कोइराला जीवनी ?
09 Feb 2016 | 12:36 PM
काठमाडौँ, २६ माघ । दिवंगत सुशील कोइराला नेपालको ३७ औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कोइराला नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट २०७० साल माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा यसै बर्ष असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको थियो । लामो समय अल्झिएको संविधान निर्माणले कोइरालाको नेतृत्वमा गति लिएको थियो । संविधान जारी भएपछि उहाँ सरकारबाट बाहिरिनुभएको थियो ।
सुशील कोइरालाको जन्म सन् १९३९ मा पिता बोधप्रसाद र माता कुमुदिनीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विराटनगरमा भएको थियो । उहाँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो । वन अधिकृत पिता बोधप्रसाद जागिरका सिलसिलामा नेपालगन्ज पुगेपछि कोइराला त्यहीँ हुर्कनुभएको थियो । सुशील कोइराला विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणाबाट प्रेरित भई २०१० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको थियो । वि. सं २०१७ मा प्रजातन्त्रको अपहरणपछि उहाँ १६ वर्षसम्म भारतमा स्वप्रवासमा रहनुभएको थियो ।
उहाँले नेपाल र भारतमा गरी करिब पाँच वर्ष राजनैतिक बन्दी जीवन बिताउनुभएको थियो । वि.सं २०३६ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएका कोइराला २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा अभियान चलाउनाका साथै २०४२ सालको सत्याग्रह र २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको थियो । सुशील कोइरालाले पार्टीमा लामो समयसम्म केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपसभापति र कार्यवाहक सभापति भएर काम गर्नुभएको थियो ।
कंग्रेसको एघारौँ महाधिवेशनपछि उहाँले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिका हैसियतले काम गर्नुभयो । लामो राजनीतिक जीवनमा सरकारी लाभको पदमा नरहेका सुशील कोइराला सन्त राजनैतिक नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । पाँच दशक राजनीतिमा बिताएका कोइरालाले ०४६ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बन्दा पनि मन्त्री पद अस्वीकार गर्नुभएको थियो । कोइराला २०६८ साल असोजमा सम्पन्न कंग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको थियो ।